Antikristy dia fantatra amin'ny alalan'ny fandavana telo.
Nisy sahoan-dresaka be momba ny antikristy dia izay, fa milaza mazava tsara ny Baiboly, iza izany. Mamaky fotsiny alohan'ny!
Milaza mazava tsara ny Baiboly izay dia ny antikristy
Mino aho fa misy fikorontanana ny hoe iza no antikristy dia. Fa ny Baiboly milaza mazava tsara ny antikristy, izay hitanao ao amin'ireo andinin-teny efatra ao amin'ny Baiboly:
1 Jaona 2:18. Ny zanaka malala, izao no ora farany. Ary tahaka ny efa renareo fa antikristy ho avy , toy ny manana ihany koa efa maro no antikristy efa tonga. Avy izany no mandre fa amin'ny fotoana farany.
1 Jaona 2:22. Iza moa no mpandainga raha tsy izay mandà an'i Jesosy tsy ho Kristy ? Ny antikristy izay mandà ny Ray sy ny Zanaka. 23. Izay rehetra mandà ny Zanaka dia tsy manana ny Ray. Na iza na iza manaiky ny Zanaka no manana ny Ray koa.
1 Jaona 4: 3. Fa ny fanahy rehetra izay tsy manaiky fa i Jesosy Kristy efa tonga tamin'ny nofo dia tsy avy amin'Andriamanitra. Izany no ilay antikristy , izay efa renareo fa ho avy, ary ankehitriny dia efa eo amin'izao tontolo izao.
2 Jaona 1: 7 Fa maro ny mpamitaka efa lasa any amin'izao tontolo izao, izay tsy manaiky fa i Jesosy Kristy efa tonga tamin'ny nofo . Izany dia ny mpamitaka sy ny antikristy .
Antikristy ny telo fandavana
Antikristy mandà fa i Jesoa no ilay Kristy.
Antikristy mandà fa i Jesoa no ilay Zanak'Andriamanitra.
Antikristy mandà an'i Jesosy Kristy efa lasa ny olona marina.
Na iza na iza manana ireo telo fandavana no antikristy. Noho izany, ny Baiboly ao amin'ny soratra masina ireo izay nanambara ny antikristy dia.
Vecka 30, söndag 1 augusti 2021 kl. 08:59